စောကျရညျယိုယို စိမျးစိမျးစို – My Blog
တနကြေ့ျောစှာတယောကျ ကြောငျးအုပျဆရာကွီးက ကြျောစှာမိဘတှကေို စာပို့ပွီးရုံးခနျး ချေါပါတယျ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကြျောစှာ ကြောငျးပွေးတဲ့အတှကျပါ။ ကြျောစှာ ကြောငျးဘယျလောကျပွေးသလဲဆိုရငျ တဈလမှ သုံးရကျထဲ ကြောငျးတကျပါတယျ။ ဆရာကွီးသတိပေးလို့ ကြောငျးပွနျတကျတဲ့အခြိနျမှာ ကြျောစှာအတှကျ အရမျးပြျောစရာကောငျးတဲ့နလေ့ေးဖွဈလာပါတယျ။ ဆရာမလေးစိမျးစိမျးစိုတယောကျ ကြျောစှာတို့အခနျးထဲကို ရောကျလာတော့ သူတခါမှ မမွငျဘူးတဲ့ ကြောငျးသားလေး ကြျောစှာကို တှလေို့ကျပါတယ။ျ ဆရာမလေးစိမျးစိမျးစို ကြျောစှာဆီ လြှောကျလာပါတယျ။ ကြျောစှာဆီ တဈလှမျးခငျြး လြှောကျလာတဲ့ ဆရာမလေး စိမျးစိမျးစိုဟာ အရမျးလှပါတယျ။ အသားအရကေ ဝငျးဝါပီး အရမျးကိုကွညျ့ကောငျးပါတယျ။ အဖွူရောငျ ရငျဖုံး အ ကငြ်္ီလေးနဲ့ ကြောငျးစိမျး ထမီလေးကို ခပျတငျးတငျးလေး ဝတျဆငျထားပါတယျ။ ဆံပငျကိုထုံးထားပီး သနပျခါး ပါးကှကျကွားလေး နဲ့အရမျးလှနပေါတယျ။ ဆရာမလေးစိမျးစိမျးစို ကြျောစှာကိုမေးတယျ။
“ဟုတျကဲ့ ဆရာမ” ဘယျဆရာ၊ ဆရာမကမှပွောတာနားမထောငျတဲ့ ကြျောစှာ အလိုလိုနရေငျး ခေါငျးညိမျွ့ပီးသား ဖွဈနတေယျ။ အဲ တာနဲ့ကြောငျးဆငျးတော့ ကြျောစှာဆိုငျကယျနဲ့ဘဲ ဆရာမလေးက နောကျကစီးပီး လိုကျလာပါတယျ။ ကြျောစှာရငျထဲမှာ အရမျးပြျော သှားတာပေါ့ ။ ဆရာမလေးစိမျးစို ကြျောစှာခါးလေးဖကျပီး လိုကျလာပါတယျ။ ကြျောစှာအရမျးပြျောနတေယျ ။ ဆရာမလေးက သူ့ ခါးဖကျထားလို့လေ။ ဆရာမလေး စိမျးစိမျးစိုရဲ့ကိုယျသငျးရနံ့လေးက ကြျောစှာ့ရငျထဲကို အေးမွစတေယျ။ ကြျောစှာဟာ ဆိုငျကယျ ကိုဖွေးဖွေးမှနျလေးနဲ့မောငျးလာတယျ ။ တနရောအရောကျမှာတော့ ခှေးတကောငျ ဆိုငျကယျရှကေ့ ဖွတျပွေးလာတယျ။ အဲတာနဲ့ ကြျောစှာ လဲ ဘရိတျကို တအားဆှဲနငျးလိုကျတယျ။ အားပါးပါး ဘာပွောကောငျးမလဲ ဆရာမရဲ့နို့တှကေ ကြျောစှာ့ကြောကို လာဖိ တယျ။ အဆိုးဆုံးက ခါးဖကျထားတဲ့ ဆရာမလကျက ကြျောစှာရဲ့လီးကို လာကိုငျမိပါတယျ။ အရှညျ ရ လကျမရှိတဲ့ ကြျောစှာလီးက ခကျြခငျြးဘဲ တောငျလာပါတော့တယျ။ ဆရာမလေးစိမျးစိမျးစိုလဲ ကြျောစှာ ရဲ့ခကျြခငျြးတောငျလာတဲ့ လီးကို ကွကျသသေပေီး ဆကျကိုငျထားမိတယျ။ ကြျောစှာတော့ ဇောခြှေးတှပွေနျနပေီလေ။ အဲတာနဲ့ ဆရာမသတိဝငျလာပီး ကြျောစှာ့လီးကို လှတျလိုကျ တယျ။
“ဆရာမ” “ဟငျ..” “အကငြ်္ီခြှတျမယျနျော…” “အငျး … ” ခြှတျလကြေျောစှာ ဆရာမ ရဲ့ ရငျဖုနျးအကငြ်္ီ အဖွူလေးကို ခြှတျ ပေးလိုကျတယျ။ ပွီးတော့ ဆရာမရဲ့ ဘျောလီကိုပါ ခြှတျလိုကျတယျ။ ပျေါလာတဲ့ဆရာမနို့ တှကေို ကြျောစှာမကျြတောငျမခတျတမျး ကွညျ့နမေိတယျ။ “ဘာကွညျ့တာလဲကှာ…ဆရာမ ရှကျတယျ” ဆိုပီး သူ့လကျနဲ့အုပျထားပါတယျ။ “အရမျးလှတယျ ဆရာမရယျ” “ခုထိ ဆရာမလို့ချေါနတေုနျးပဲလား… မောငျရယျ.. စိမျးလမေရှကျတမျးပွောရရငျ မောငျ့ကို မွငျမွငျခငျြးခဈြမိတယျ.. စိမျးကို ထငျ သေးလာဟငျ” “မသေးပါဘူး…မရယျ” “ဘာခုမှ မ လဲ သူမြားပွောမှချေါတယျ” “ရှူး…တိတျတိတျနေ” ကြျောစှာပွောပွောဆိုဆို ဆရာမလေး ရဲ့နို့ကို စုပျလိုကျတယျ။ “အငျးးးဟငျးးးဟငျးးးမောငျရယျ…” ကြျောစှာ့ လကျကဆရာမလေးရဲ့ ကြောငျးစိမျးထဘီ ပျေါ ကနအေုပျပွီး ဆရာမ ရဲ့ အဖုတျလေးကို ကိုငျလိုကျတယျ။ ဆရာမလေးကော့သှားတယျ။ ကြျောစှာလဲ ဆရာမကို နို့စို့ရငျးကနေ ဗိုကျ သားလေးနမျးတော့ “အ…မောငျ ယားတယျ” ကြျောစှာ လဲဆရာမရဲ့ ကြောငျးစိမျး ထမီလေးကို လှနျတငျလိုကျပါတယျ။ ဆရာမ က အတှငျးခံ လုံးဝ ဝတျမထားပါဘူး ။ ကြျောစှာ တဈယောကျ ဆရာမပေါငျသားတှနေမျးတော့ ဆရာမ ကော့ကော့လာတယ။ျ ဘယျ ဘကျပီးတော့ ညာဘကျ ဆရာမရဲ့ အဖုတျလေးကွညျ့တော့ အရညျတှေ ရှဲနပေီ။ ကြျောစှာဟာ ပေါငျနမျးရငျးကနေ ခွသေလုံးတှေ နမျးတယျ။ ပွီးတော့တဖွေးဖွေး ပွနျတကျလာတယ။ျ ဆရာမလေး ကော့ကော့လာတယျ။ ပွီးမှမပွောမဆို လြှာနဲ့ ဆရာမစောကျ ပတျကိုအပွားလိုကျ အမှတျမထငျ အောကျ ကနေ ယကျလိုကျတယျဆရာမလဲ တခါတညျးကော့တကျသှားတယျ။
“အားးးဟငျးးးမောငျရယျငရဲကွီးနပေါ့မယျ” ကြျောစှာဟာ ဆရာမပေါငျကိုအောကျကနေ ပငျ့မလိုကျတော့ ဆရာမစောကျပတျကွီး က ပွူးပွီးထှကျလာတယျ..။ ” မ…” “ဟငျ..” “မရဲ့ပေါငျကို လကျနဲ့ဆှဲထား” “အငျး…” ဆရာမလေး စိမျးစိမျးစိုလဲ ခိုငျးတဲ့ အတိုငျး လုပျပေးတယျ။ ကြျောစှာကစောကျပတျကိုဖွဲပွီး ယကျလိုကျတယျ။ “အားးးးမောငျရယျ….” ကြျောစှာစောကျပတျထဲကို လြှာထိုးထညျ့လိုကျတော့ ဆရာမရဲ့ပေါငျကိုငျထားတဲ့လကျတှကေ ပွုတျပွီး ကြျောစှာခေါငျးကို လာကိုငျတယျ။ “အားးးမောငျရယျ ကောငျးလိုကျတာ…” ကြျောစှားအားရပါးရယကျပွီးတော့မှ ဆရာမလေးပေါငျကွားကို နရောယူလိုကျပွီး ထညျ့မလိုအလုပျ “မောငျ..ခနနအေုံး” ဆိုပီး ဆရာမလေး လဲ ကြျောစှာကို အိပျယာပျေါ အသာတှနျးလှဲလိုကျတယျ။ “မောငျက မကိုကောငျးအောငျ လုပျပေးတော့ မလဲ လုပျပေးခငျြတယျ” ဆိုပီးကြျောစှာ့ လီးကိုမှုတျတော့တာဘဲ “အားးးးးမရယျကောငျးလိုကျတာ” ကြျောစှာလဲ ဆရာမလေးမှုတျတာကို အလူးအလိမျ့ခံနရေတယျ။
“မ…တျောတော့ နျော…” ဟငျ….ဘာလို့လဲ မ….လုပျပေးတာ မကောငျးလို့လား” “ဟုတျဘူး… အရမျးကောငျး လို့ ပွီးကုနျမှာ စိုးလို့ ပါ.. ဟော့ဒီ…မောငျ့ လီးကွီး နဲ့..မ ကို လိုးခငျြသေးတယျ ” “အာ…မောငျကလဲ ပွောတာရိုငျးလိုကျတာ..” မကလဲ လိုးတာကိုလိုး တယျလို့မပွောတော့ ဘယျလိုပွောမှာလဲ” မသိဘူးကှာ… မ နားရှကျတယျ” ကြျောစှာလဲ ဆရာမလေးပေါငျကွားကို နရောယူလိုကျ တယျ။ “မောငျ…” “ဗြာ…” ဖွေးဖွေး လုပျနျော…. မ ကွောကျတယျ..” အငျးပါ…မရယျ” ကြျောစှာဟာ လီးကိုစောကျပတျထဲမ ထညျ့သေးပဲ စောကျစလေ့ေးကို လီးနဲ့အပျေါအောကျဆှဲ ပှတျပေးနလေိုကျတယျ…။ “အငျးးးဟငျးးးးမောငျဘာလုပျနတောလဲ…ထညျ့ ပေးပါတော့..” “ဘာထညျ့ရမှာလဲဟငျ မ…” ” မောငျကသိရဲ့သားနဲ့ကှာ..” “မသိလိုပေါ့ မရဲ့… ဟဲဟဲ ” အာ မောငျကလဲကှာ မော ငျ့ရဲ့လီးကို မစောကျပတျထဲ ထညျ့ပေးပါတော့နျော မအရမျးယားနပေီ..” “ဟုတျကဲ့ … ထညျ့ပွီနျော မ…” “အငျး..မွနျမွနျထညျ့ပါ တော့နျော….” ဆရာမလေး စိမျးစိမျးစို တယောကျ အရှကျတရားတှေ မရှိတော့ပဲ တောငျးဆိုနပေါ ပွီ။ ကြျောစှာလဲ ဆရာမလေးရဲ့ ကြောငျးစိမျး ထမီလေးကို ခါးအထိ လှနျတငျလိုကျပွီး လီးကွီးကို စောကျပတျ အဝမှာ တပွေီ့း ဆောငျ့လိုး လိုကျပါတယျ။
“ဗွိ…ဗွဈ…ဗွဈ…ဖှတျ…” အငျး….အ….အ….မောငျရယျ… အား…” ကြျောစှာ့ ရဲ့လီးတဈဆုံးဆရာမလေး စောကျပတျထဲဝငျသှား တော့ “အားးးးမောငျရယျ ကောငျးလိုကျတာ နာနာဆောငျ့ပေးပါနျော … မ ပွီးတော့မယျ.. အားးးးဆောငျ့ပါ နာနာဆောငျ့ပါ မောငျ ရယျ..” ကြျောစှာလဲ ဆရာမလေးကတောငျးဆိုနတေော့ မီးကုနျယမျးကုနျ ဆောငျ့ပါတော့တယ။ျ “အားးးကောငျးလိုကျတာ မ ရယျ” “မောငျ…ဆောငျ့ နာနာဆောငျ့…နာနာလေးလိုးပေးပါ မောငျ ရယျ…” “အားးးကောငျးလိုကျတာမရယျ..” အခကျြငါးဆယျ လောကျ ခပျပွငျးပွငျးဆောငျ့တော့ ဆရာမလေးကော့တကျလာပွီး ငွိမျကသြှားတယျ။ ကြျောစှာလဲ တပွိုငျနကျထဲ ဆရာမလေးရဲ့ စောကျပတျထဲကို လီးရညျတှေ အကုနျ ပနျးထညျ့လိုကျတယျ။ နှဈယောကျသား ကာမဘုံ ထိပျဆုံးကို အတူတကျလှမျးလိုကျပါတော့ တယျ။ ကုတငျပျေါမှာ တယောကျနဲ့တယောကျ တငျးတငျး ကွပျကွပျ ဖကျထားပါတယျ။ ဆယျမိနဈလောကျနမှေ…. “မောငျ…” “ဗြာ…” မ…ကိုအထငျသေးလားဟငျ…” “မသေးပါဘူး… အရမျးခဈြတယျမရယျ..” “မ…က ပိုခဈြတာပါနျော ဟီးးး” ဆိုပီး ကြျောစှာလညျး ဆရာမလေးရဲ့နှုတျခမျးကို နမျးလိုကျတယျ။ “အရမျးခဈြတယျ မရယျ” အဲဒီနကေ့စပွီး ကြောငျးသားလေးကြျောစှာနဲ့ဆရာမလေး စိမျးစိမျးစို တို့နတေို့ငျး လိုးကပြါတော့တယျ။
တနေ့ကျော်စွာတယောက် ကျောင်းအုပ်ဆရာကြီးက ကျော်စွာမိဘတွေကို စာပို့ပြီးရုံးခန်း ခေါ်ပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကျော်စွာ ကျောင်းပြေးတဲ့အတွက်ပါ။ ကျော်စွာ ကျောင်းဘယ်လောက်ပြေးသလဲဆိုရင် တစ်လမှ သုံးရက်ထဲ ကျောင်းတက်ပါတယ်။ ဆရာကြီးသတိပေးလို့ ကျောင်းပြန်တက်တဲ့အချိန်မှာ ကျော်စွာအတွက် အရမ်းပျော်စရာကောင်းတဲ့နေ့လေးဖြစ်လာပါတယ်။ ဆရာမလေးစိမ်းစိမ်းစိုတယောက် ကျော်စွာတို့အခန်းထဲကို ရောက်လာတော့ သူတခါမှ မမြင်ဘူးတဲ့ ကျောင်းသားလေး ကျော်စွာကို တွေ့လိုက်ပါတယ။် ဆရာမလေးစိမ်းစိမ်းစို ကျော်စွာဆီ လျှောက်လာပါတယ်။ ကျော်စွာဆီ တစ်လှမ်းချင်း လျှောက်လာတဲ့ ဆရာမလေး စိမ်းစိမ်းစိုဟာ အရမ်းလှပါတယ်။ အသားအရေက ဝင်းဝါပီး အရမ်းကိုကြည့်ကောင်းပါတယ်။ အဖြူရောင် ရင်ဖုံး အ င်္ကျီလေးနဲ့ ကျောင်းစိမ်း ထမီလေးကို ခပ်တင်းတင်းလေး ဝတ်ဆင်ထားပါတယ်။ ဆံပင်ကိုထုံးထားပီး သနပ်ခါး ပါးကွက်ကြားလေး နဲ့အရမ်းလှနေပါတယ်။ ဆရာမလေးစိမ်းစိမ်းစို ကျော်စွာကိုမေးတယ်။
“ဟုတ်ကဲ့ ဆရာမ” ဘယ်ဆရာ၊ ဆရာမကမှပြောတာနားမထောင်တဲ့ ကျော်စွာ အလိုလိုနေရင်း ခေါင်းညိမ်ြ့ပီးသား ဖြစ်နေတယ်။ အဲ တာနဲ့ကျောင်းဆင်းတော့ ကျော်စွာဆိုင်ကယ်နဲ့ဘဲ ဆရာမလေးက နောက်ကစီးပီး လိုက်လာပါတယ်။ ကျော်စွာရင်ထဲမှာ အရမ်းပျော် သွားတာပေါ့ ။ ဆရာမလေးစိမ်းစို ကျော်စွာခါးလေးဖက်ပီး လိုက်လာပါတယ်။ ကျော်စွာအရမ်းပျော်နေတယ် ။ ဆရာမလေးက သူ့ ခါးဖက်ထားလို့လေ။ ဆရာမလေး စိမ်းစိမ်းစိုရဲ့ကိုယ်သင်းရနံ့လေးက ကျော်စွာ့ရင်ထဲကို အေးမြစေတယ်။ ကျော်စွာဟာ ဆိုင်ကယ် ကိုဖြေးဖြေးမှန်လေးနဲ့မောင်းလာတယ် ။ တနေရာအရောက်မှာတော့ ခွေးတကောင် ဆိုင်ကယ်ရှေ့က ဖြတ်ပြေးလာတယ်။ အဲတာနဲ့ ကျော်စွာ လဲ ဘရိတ်ကို တအားဆွဲနင်းလိုက်တယ်။ အားပါးပါး ဘာပြောကောင်းမလဲ ဆရာမရဲ့နို့တွေက ကျော်စွာ့ကျောကို လာဖိ တယ်။ အဆိုးဆုံးက ခါးဖက်ထားတဲ့ ဆရာမလက်က ကျော်စွာရဲ့လီးကို လာကိုင်မိပါတယ်။ အရှည် ရ လက်မရှိတဲ့ ကျော်စွာလီးက ချက်ချင်းဘဲ တောင်လာပါတော့တယ်။ ဆရာမလေးစိမ်းစိမ်းစိုလဲ ကျော်စွာ ရဲ့ချက်ချင်းတောင်လာတဲ့ လီးကို ကြက်သေသေပီး ဆက်ကိုင်ထားမိတယ်။ ကျော်စွာတော့ ဇောချွေးတွေပြန်နေပီလေ။ အဲတာနဲ့ ဆရာမသတိဝင်လာပီး ကျော်စွာ့လီးကို လွှတ်လိုက် တယ်။
“ဆရာမ” “ဟင်..” “အင်္ကျီချွတ်မယ်နော်…” “အင်း … ” ချွတ်လေကျော်စွာ ဆရာမ ရဲ့ ရင်ဖုန်းအင်္ကျီ အဖြူလေးကို ချွတ် ပေးလိုက်တယ်။ ပြီးတော့ ဆရာမရဲ့ ဘော်လီကိုပါ ချွတ်လိုက်တယ်။ ပေါ်လာတဲ့ဆရာမနို့ တွေကို ကျော်စွာမျက်တောင်မခတ်တမ်း ကြည့်နေမိတယ်။ “ဘာကြည့်တာလဲကွာ…ဆရာမ ရှက်တယ်” ဆိုပီး သူ့လက်နဲ့အုပ်ထားပါတယ်။ “အရမ်းလှတယ် ဆရာမရယ်” “ခုထိ ဆရာမလို့ခေါ်နေတုန်းပဲလား… မောင်ရယ်.. စိမ်းလေမရှက်တမ်းပြောရရင် မောင့်ကို မြင်မြင်ချင်းချစ်မိတယ်.. စိမ်းကို ထင် သေးလာဟင်” “မသေးပါဘူး…မရယ်” “ဘာခုမှ မ လဲ သူများပြောမှခေါ်တယ်” “ရှူး…တိတ်တိတ်နေ” ကျော်စွာပြောပြောဆိုဆို ဆရာမလေး ရဲ့နို့ကို စုပ်လိုက်တယ်။ “အင်းးးဟင်းးးဟင်းးးမောင်ရယ်…” ကျော်စွာ့ လက်ကဆရာမလေးရဲ့ ကျောင်းစိမ်းထဘီ ပေါ် ကနေအုပ်ပြီး ဆရာမ ရဲ့ အဖုတ်လေးကို ကိုင်လိုက်တယ်။ ဆရာမလေးကော့သွားတယ်။ ကျော်စွာလဲ ဆရာမကို နို့စို့ရင်းကနေ ဗိုက် သားလေးနမ်းတော့ “အ…မောင် ယားတယ်” ကျော်စွာ လဲဆရာမရဲ့ ကျောင်းစိမ်း ထမီလေးကို လှန်တင်လိုက်ပါတယ်။ ဆရာမ က အတွင်းခံ လုံးဝ ဝတ်မထားပါဘူး ။ ကျော်စွာ တစ်ယောက် ဆရာမပေါင်သားတွေနမ်းတော့ ဆရာမ ကော့ကော့လာတယ။် ဘယ် ဘက်ပီးတော့ ညာဘက် ဆရာမရဲ့ အဖုတ်လေးကြည့်တော့ အရည်တွေ ရွှဲနေပီ။ ကျော်စွာဟာ ပေါင်နမ်းရင်းကနေ ခြေသလုံးတွေ နမ်းတယ်။ ပြီးတော့တဖြေးဖြေး ပြန်တက်လာတယ။် ဆရာမလေး ကော့ကော့လာတယ်။ ပြီးမှမပြောမဆို လျှာနဲ့ ဆရာမစောက် ပတ်ကိုအပြားလိုက် အမှတ်မထင် အောက် ကနေ ယက်လိုက်တယ်ဆရာမလဲ တခါတည်းကော့တက်သွားတယ်။
“အားးးဟင်းးးမောင်ရယ်ငရဲကြီးနေပါ့မယ်” ကျော်စွာဟာ ဆရာမပေါင်ကိုအောက်ကနေ ပင့်မလိုက်တော့ ဆရာမစောက်ပတ်ကြီး က ပြူးပြီးထွက်လာတယ်..။ ” မ…” “ဟင်..” “မရဲ့ပေါင်ကို လက်နဲ့ဆွဲထား” “အင်း…” ဆရာမလေး စိမ်းစိမ်းစိုလဲ ခိုင်းတဲ့ အတိုင်း လုပ်ပေးတယ်။ ကျော်စွာကစောက်ပတ်ကိုဖြဲပြီး ယက်လိုက်တယ်။ “အားးးးမောင်ရယ်….” ကျော်စွာစောက်ပတ်ထဲကို လျှာထိုးထည့်လိုက်တော့ ဆရာမရဲ့ပေါင်ကိုင်ထားတဲ့လက်တွေက ပြုတ်ပြီး ကျော်စွာခေါင်းကို လာကိုင်တယ်။ “အားးးမောင်ရယ် ကောင်းလိုက်တာ…” ကျော်စွားအားရပါးရယက်ပြီးတော့မှ ဆရာမလေးပေါင်ကြားကို နေရာယူလိုက်ပြီး ထည့်မလိုအလုပ် “မောင်..ခနနေအုံး” ဆိုပီး ဆရာမလေး လဲ ကျော်စွာကို အိပ်ယာပေါ် အသာတွန်းလှဲလိုက်တယ်။ “မောင်က မကိုကောင်းအောင် လုပ်ပေးတော့ မလဲ လုပ်ပေးချင်တယ်” ဆိုပီးကျော်စွာ့ လီးကိုမှုတ်တော့တာဘဲ “အားးးးးမရယ်ကောင်းလိုက်တာ” ကျော်စွာလဲ ဆရာမလေးမှုတ်တာကို အလူးအလိမ့်ခံနေရတယ်။
“မ…တော်တော့ နော်…” ဟင်….ဘာလို့လဲ မ….လုပ်ပေးတာ မကောင်းလို့လား” “ဟုတ်ဘူး… အရမ်းကောင်း လို့ ပြီးကုန်မှာ စိုးလို့ ပါ.. ဟော့ဒီ…မောင့် လီးကြီး နဲ့..မ ကို လိုးချင်သေးတယ် ” “အာ…မောင်ကလဲ ပြောတာရိုင်းလိုက်တာ..” မကလဲ လိုးတာကိုလိုး တယ်လို့မပြောတော့ ဘယ်လိုပြောမှာလဲ” မသိဘူးကွာ… မ နားရှက်တယ်” ကျော်စွာလဲ ဆရာမလေးပေါင်ကြားကို နေရာယူလိုက် တယ်။ “မောင်…” “ဗျာ…” ဖြေးဖြေး လုပ်နော်…. မ ကြောက်တယ်..” အင်းပါ…မရယ်” ကျော်စွာဟာ လီးကိုစောက်ပတ်ထဲမ ထည့်သေးပဲ စောက်စေ့လေးကို လီးနဲ့အပေါ်အောက်ဆွဲ ပွတ်ပေးနေလိုက်တယ်…။ “အင်းးးဟင်းးးးမောင်ဘာလုပ်နေတာလဲ…ထည့် ပေးပါတော့..” “ဘာထည့်ရမှာလဲဟင် မ…” ” မောင်ကသိရဲ့သားနဲ့ကွာ..” “မသိလိုပေါ့ မရဲ့… ဟဲဟဲ ” အာ မောင်ကလဲကွာ မော င့်ရဲ့လီးကို မစောက်ပတ်ထဲ ထည့်ပေးပါတော့နော် မအရမ်းယားနေပီ..” “ဟုတ်ကဲ့ … ထည့်ပြီနော် မ…” “အင်း..မြန်မြန်ထည့်ပါ တော့နော်….” ဆရာမလေး စိမ်းစိမ်းစို တယောက် အရှက်တရားတွေ မရှိတော့ပဲ တောင်းဆိုနေပါ ပြီ။ ကျော်စွာလဲ ဆရာမလေးရဲ့ ကျောင်းစိမ်း ထမီလေးကို ခါးအထိ လှန်တင်လိုက်ပြီး လီးကြီးကို စောက်ပတ် အဝမှာ တေ့ပြီး ဆောင့်လိုး လိုက်ပါတယ်။
“ဗြိ…ဗြစ်…ဗြစ်…ဖွတ်…” အင်း….အ….အ….မောင်ရယ်… အား…” ကျော်စွာ့ ရဲ့လီးတစ်ဆုံးဆရာမလေး စောက်ပတ်ထဲဝင်သွား တော့ “အားးးးမောင်ရယ် ကောင်းလိုက်တာ နာနာဆောင့်ပေးပါနော် … မ ပြီးတော့မယ်.. အားးးးဆောင့်ပါ နာနာဆောင့်ပါ မောင် ရယ်..” ကျော်စွာလဲ ဆရာမလေးကတောင်းဆိုနေတော့ မီးကုန်ယမ်းကုန် ဆောင့်ပါတော့တယ။် “အားးးကောင်းလိုက်တာ မ ရယ်” “မောင်…ဆောင့် နာနာဆောင့်…နာနာလေးလိုးပေးပါ မောင် ရယ်…” “အားးးကောင်းလိုက်တာမရယ်..” အချက်ငါးဆယ် လောက် ခပ်ပြင်းပြင်းဆောင့်တော့ ဆရာမလေးကော့တက်လာပြီး ငြိမ်ကျသွားတယ်။ ကျော်စွာလဲ တပြိုင်နက်ထဲ ဆရာမလေးရဲ့ စောက်ပတ်ထဲကို လီးရည်တွေ အကုန် ပန်းထည့်လိုက်တယ်။ နှစ်ယောက်သား ကာမဘုံ ထိပ်ဆုံးကို အတူတက်လှမ်းလိုက်ပါတော့ တယ်။ ကုတင်ပေါ်မှာ တယောက်နဲ့တယောက် တင်းတင်း ကြပ်ကြပ် ဖက်ထားပါတယ်။ ဆယ်မိနစ်လောက်နေမှ…. “မောင်…” “ဗျာ…” မ…ကိုအထင်သေးလားဟင်…” “မသေးပါဘူး… အရမ်းချစ်တယ်မရယ်..” “မ…က ပိုချစ်တာပါနော် ဟီးးး” ဆိုပီး ကျော်စွာလည်း ဆရာမလေးရဲ့နှုတ်ခမ်းကို နမ်းလိုက်တယ်။ “အရမ်းချစ်တယ် မရယ်” အဲဒီနေ့ကစပြီး ကျောင်းသားလေးကျော်စွာနဲ့ဆရာမလေး စိမ်းစိမ်းစို တို့နေ့တိုင်း လိုးကျပါတော့တယ်။
Categorized as အငျးဆကျ Tagged စောကျရညျယိုယို စိမျးစိမျးစို